စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 9:40:00 AM
လဟာ ဘယ်လိုအရာဝတ္ထုအစိုင်အခဲတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားသလဲ၊ လပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ဆန်ဖွပ်တဲ့အဖိုးအိုနဲ့ အဖိုးအိုရဲ့အနီးမှာ လိုချင်တာလေးတစ်ခုကိုရဖို့အတွက် မျှော်လင့်နေတဲ့ ယုန်ကလေးတို့ရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်တွေဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲ၊ အားလုံးသော သတ္တ၀ါတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ငြိမ်းချမ်းသာယာအောင် ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ လရဲ့အလင်းရောင်က ဘယ်ကရလို့ ဘယ်လိုထွက်ပေါ်လာရသလဲဆိုတာ အရှည်တ၀င့် စဉ်းစားနေစရာမလိုတော့ ဘူးပေါ့။
အေးမြတဲ့လရောင်လေးရဲ့အောက်မှာ ဆန်ဖွပ်တဲ့အဖိုးအိုနဲ့ ယုန်ကလေးကို ငေးမော့ကြည့်ရင်း နဲ့ပဲ သူကပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ နှစ်သက်ဖွယ်စွမ်းအားလေးတွေကို အပြည့်အ၀ခံစားနေရင်းနဲ့ပဲ သာယာမှုကို ကြည်နူးခံစားနေတာ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။
လသာညရှိခဲ့လို့ လကွယ်ညဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဖိုးလမင်းကြီးကတော့ လကမ္ဘာဆိုတဲ့ ဂြိုလ်လေး တည်နေတရွေ့ သစ္စာရှိရှိနဲ့ ၀တ်တရားမပျက် ဆက်လက်ပြီး သူစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေကို ပေးစွမ်းသွားဦးမှာပါ။
Sat Mar 17, 09:33:00 PM 2007
စာရေးကောင်းလှချည်လားဗျာ. ဒီဘလော့ဂ်လေးကို အတွေ့နောက်ကျသွားတယ်. ဆောရီး မမီးမီးရေ...
Mon Apr 23, 03:02:00 PM 2007